SARIIRAHA CAAGAGGA CAAGA AH IYO QALABKA KALE EE GACMAHOODA - INFRASTRUCTURE
Qalabka qurxinta caaga ah ee sariirahaaga (sawirro leh)
Xitaa haddii aad amar ku siisid goobtaada, waxaad mar walba hagaajin kartaa waxna ka dhigi kartaa. Ka dib oo dhan, walxaha qurxinta ayaa ku haboon ma aha oo kaliya in dhismaha, laakiin sidoo kale beerta.
Waxaa suurtagal ah in lagu qurxiyo ubaxyo, sariiraha iyo meelaha ku wareegsan geedaha, tusaale ahaan, iyadoo la adeegsanayo dayrarka. Noocyo kala duwan oo caag ah oo caag ah ayaa si isku dheelitiran u buuxiya gudaha gudaha goobtaada waxayna kaa caawinayaan nidaamyada dhirta, si loo xaqiijiyo koritaankooda haboon iyo xitaa jiilaalka.
Waa maxay faa'iidooyinka
Intaa waxaa dheer in dhamaystirka buuxda ee sharraxaadda goobtaada, dayrka sariiraha waxay qaadaan waxyaabo badan oo faa'iido leh:
ha u oggolaan dhirta dilka ah in ay koraan;
ka ilaali carrada rusheeyaya sariiro sariiro ah iyo meelo carrada dabacsan;
faragelin ku yeeshay qashinka;
dhirta ka ilaaliya waxyeelooyinka farsamooyinka kala duwan, ha ahaato cawska ama lugaha xayawaankaaga.
Waxyaabaha ka soo baxa balaastikada atmospheric ah, marka loo eego, waxay leeyihiin tiro faa'iido leh oo ka badan dayrarka maaddooyinka kale:
dayrarka caaga ah ayaa si fiican loogu dulqaataa dhibco heerkulka ah, waxaana loo dhisi karaa si joogto ah oo aan dib loogu celin karin arrintan xilli-xiga;
balaastiggu waa alaabo synthetic ah oo u adkeysanaya iftiinka qorraxda oo aan qallalayn;
Dayrarka noocan oo kale ah wuxuu qaabka ugu wanaagsan ku hayaa, wuxuu kuu oggolaanayaa inaad abuurto noocyo iyo qaabab kala duwan;
qiimaha la awoodi karo iyo sahlanaanta rakibidda.
Sidoo kale akhri sidaad u samayn lahayd trellis iyo foosto xagaaga xagaaga adiga oo isticmaalaya gacmahaaga.
Noocyada iyo rakibidda duufaanka caagga ah
Waxaa jira kala duwanaansho badan ee dayrarka caag ah ee sariiraha, waxay u kala duwan yihiin dibadda iyo ujeedooyin kala duwan. Waxaa lagama maarmaan ah in si cad loo qeexo hawsha qandhada caaga ah ee caaga ah.
Iyo haddii ay tahay ficil qalafsan ama la dagaalanka koritaanka dhirta ee sariirtaada ubaxa, waxaad dooran doontaa ikhtiyaarka ku habboon.
Xadhig xuduud ah
Dayrarka noocan oo kale ah wuxuu leeyahay midab kala duwan oo midabkiisu kala duwan yahay, waxaana sidoo kale lagu tilmaamayaa muuqaalkooda. Iyadoo ay sabab u tahay dabacsanaanta iyo baaxadda, waxaad abuuri kartaa qaabab kala duwan. Wareegga bandhiga xajmiga waa 10 ilaa 90 cm, iyo dhumucuna waa 1.2 cm.
Iyadoo caawimaadda xayndaabka noocan oo kale ah waxaad si fudud u qurxin kartaan sariirta ubaxa waxayna ku calaamadeeysaa wadooyinka xagaaga xagaaga. Si aad u rakibtid cajalad-jajabka uma baahna xirfado iyo qalab gaar ah. Waxa kaliya oo lagama maarmaan ah in laga fekero qaabka ka mid ah halabuurka mustaqbalka, qodo nasasho hareeraha wareegga sawirka iyo ku xir bareeyaal caag ah. Xuddunta waxaa lagu shaabadeeyn karaa ciddiyaha dareeraha ama blowtorch.
Ka dibna ku rusheey kaliya haraaga dhulka. Xumada kaliya ee xayndaabka noocan oo kale ah waa niyadjabkii ehelka.
Qeybaha noocan oo kale ah waa kuwo daba dheeraada marka la barbardhigo dhagxaanta iyo yareynta dhaawaca farsamada, maadaama ay ka samaysan yihiin caag adag oo leh dhumuc oo ugu yaraan ah 15 cm.
Tani waxay sababtay, kala duwanaanta codsiga ee dayrarka noocan oo kale ah ayaa sii ballaarinaya. Waxaa suurtogal ah in sariiraha loo isticmaalo guddi caag ah oo loogu talagalay sifeynta sariiraha kala duwan iyo sanduuqa caruurta ee carruurta.
Waa muhiim! Guddiga beerta waa qalab lagama maarmaan ah oo abuuraya aqalka dhirta lagu koriyo sababtoo ah awoodeeda iyo iska caabinta isbeddelka heerkulka, iyo sidoo kale sababtoo ah xaqiiqda fidinta filim ama qaab kale ma aha mid adag.
Dhibaatooyinkaasi kuma jiri doonaan rakibida noocaas oo kale ah. Qalabka waxaa lagu qalabeeyaa casaan iyo korid, oo si fudud loo dhejiyo. Ka dibna isticmaal falejooyinka (kuwaas oo ay ku jiraan) waxaad u baahan tahay inaad hagaajiso xayndaabka, wax kastana waa diyaar!
Xudduudaha xuduudaha leh waxay ka kooban yihiin waxyaabo caag ah oo si fudud u xiran. Noocaan xayndaabka xayawaanka ayaa ku habboon sariiraha ubaxa, dhirta dabaasha iyo waddooyinka. Si aad u rakibto, waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad isku xirto walxaha si wadajir ah oo aad ku rakibtid dhulka iyadoo la adeegsanaayo talooyinkooda.
Sidoo kale, xayndaab ku filan oo loogu talagalay sariiraha waxaa loogu tala gali karaa gacmahaaga ka soo wareega caagadaha. Way fududahay in la rakibo, lagu dhejiyo bareeso sida naqshadeeye.
Nalalka fudud, laakiin caag bakeer ah ayaa socon doona waqti dheer. Dayrkani wuxuu noqon karaa mid siman ama kabaabsan, sidoo kale wuxuu leeyahay midabyo kala duwan. Waxaad ka abuuri kartaa sariiraha sarreysa iyo kuwa hooseeya oo ka sameysan caagado caag ah.
Xayndaabkani waa mid ku haboon in lagu kala saaro sariiraha ubaxa iyo cawska. Thanks to naqshadahan, dhirtaadu waxay noqon doontaa mid si taxadar leh loo ilaaliyo waxyeellada qashinka cawska. Iyo naqshadda asalka ah, oo ku dhajisa xayndaabka dhagax, waxay noqon doontaa quruxda cajiibka ah ee boggaaga.
Ma taqaanaa? Laga soo bilaabo kabaha dhalada ee haray, waxaad samayn kartaa waxyaabo gaar ah oo nashqad leh gacmahaaga - jiifo miisaan ku wareegsan beerta ubax ama abuuro masalooyin qurux badan.
Deedka sariiraha waxay u adeegi kartaa mesh balaastig ah. Xayndaabka noocan oo kale ah ayaa ku siin doona difaac lagu kalsoon yahay dhirtaada iyo qurxinta beerta ubaxa ama cawska. Way fududahay in la rakibo oo kuu adeegi doono dhowr xilli. Grids waxaa loogu talagalay sariiraha sare iyo kuwa hoose.
In kasta oo xaqiiqda ah in tani ay tahay doorashada ugu weyn ee miisaaniyadda, waxaad ka dhigi kartaa dhalo oo aan lahayn xayndaab cajiib ah. Aan u ciyaaro riyadayda, iyo alaabta qurxinta gaarka ah waxay qurxin doontaa beertaada waxayna ilaalinaysaa dhirta. Iyo alaabada synthetic ee laga sameeyey taas oo aan la waxyeeleeyo ciidda.
Akhri sidoo kale duurka si dhakhso ah u koraya ee daadadka sida forsythia, privet, yew, boxwood, thuja, sloe.
Xeerarka diyaarinta iyo rakibida dayrka caagagga
Sariiraha kabaha caagagga ah waa kuwo aad u fudud in la rakibo, uma baahna diyaar garow gaar ah. Dhammaan waxa loo baahan yahay waa waxyoonaan iyo khiyaali.
Marka sawirka la sawiro ama si fudud loo soo saaro, si fudud ayaad u soo jeedin kartaa fikraddaada nolosha. Faa'iidada weyn ee dayrarka caaga ah ee fududeynta rakibaadda.
Waa muhiim! Marka aad dooranaysid dayrarka sariiraha, tixgeli dhererka iyo meesha dhirta lagu beeray.
Sida aad ka arki karto, sariiraha caagagga ah waa qayb qurux badan oo ah qurxinta iyo dhamaystirka goobtaada, iyo sahlanaanta rakibaadda iyo helitaanka si cad ujeedo u ah inay ku dhejiso "maqnado caag ah" ee sariirta ubaxaaga.